Booliska Malmö oo xal ku dhow | Somaliska
Booliska magaalada Malmö ayaa sheegay in ay ku dhowyihiin in ay gacanta ku dhigaan dambiilaha ka dambeeya weeraro dhowr ah oo lagu qaaday dadka soo galootiga ah ee ku nool magaaladaas. Xalay habeenkii Axada ayaa ugu dambeysay oo nin Irani ah lagu weeraray dukaankiisa asagoo ka badbaadey rasaastii balse ninkii weerarka soo qaaday ayaa madaxa jeesko uga dhuftay, ayadoo arintaas ay sheegeen booliska in ay siineyso cadeynta dhiiga DNA taasoo u sahleysa in ay aqoonsadaan dambiilaha. Booliiska ayaa sheegay in ay soo gaareen in ka badan 100 fariimood oo ku saabsan dambiilaha ayagoo u sheegay dadka in ay is dejiyaan oo ay booliska si dhaqsi ah ula soo xiriiraan. Dhinaca kale, cabsida laga qabo dhibaatada Malmö in ay ku faafto gobolada dalka aya sii kordheysa ayadoo dadka Somaliska ku xiran ay noo sheegeen in ay jiraan shaqooqooyin cunsuriyeed oo ka dhacay magaalooyin kale oo ka mid ah Sweden taasoo lagula kacay dad Somali ah. Hadaba waxaan u sheegeynaa dadku in ay is dejiyaan oo ay qortaan nambarka booliska 112 ayna la xiriiraan booliska haddii ay qatar timaado.
Booliska magaalada Malmö ayaa sheegay in ay ku dhowyihiin in ay gacanta ku dhigaan dambiilaha ka dambeeya weeraro dhowr ah oo lagu qaaday dadka soo galootiga ah ee ku nool magaaladaas.
Xalay habeenkii Axada ayaa ugu dambeysay oo nin Irani ah lagu weeraray dukaankiisa asagoo ka badbaadey rasaastii balse ninkii weerarka soo qaaday ayaa madaxa jeesko uga dhuftay, ayadoo arintaas ay sheegeen booliska in ay siineyso cadeynta dhiiga DNA taasoo u sahleysa in ay aqoonsadaan dambiilaha.
Booliiska ayaa sheegay in ay soo gaareen in ka badan 100 fariimood oo ku saabsan dambiilaha ayagoo u sheegay dadka in ay is dejiyaan oo ay booliska si dhaqsi ah ula soo xiriiraan.
Dhinaca kale, cabsida laga qabo dhibaatada Malmö in ay ku faafto gobolada dalka aya sii kordheysa ayadoo dadka Somaliska ku xiran ay noo sheegeen in ay jiraan shaqooqooyin cunsuriyeed oo ka dhacay magaalooyin kale oo ka mid ah Sweden taasoo lagula kacay dad Somali ah.
Hadaba waxaan u sheegeynaa dadku in ay is dejiyaan oo ay qortaan nambarka booliska 112 ayna la xiriiraan booliska haddii ay qatar timaado.